May 21, 2019 muqdisho 1
Beesha Isaaq ayaa dalka mareykAnkA waxaa ay Dacwad Been abuur ah kusoo oogtay Korneyl Tuke oo kamid ahaa saraakiishi Siyaad Barre islamarkaana ah Sarkaal ka soo Jeeda SSC, Hadaba Waxaa arinkaasi si adag uga hadlay
Mas’uuliyiintii dowladda ee shalay lagu xanibay garoonka Nairobi oo saaka lagu soo celiyay Muqdisho
May 21, 2019 muqdisho 3
Wasiir Kuxigeenka Tamarta iyo Biyaha Xukuumadda Soomaaliya Cusmaan Libaax iyo labada Senator ee kala ah Senator Ilyaas Cali Xasan iyo Senator Zamzam Dahir oo xalay ku xanibnaa Garoonka diyaaradaha Joma Kenyatta ee magaalada Nairobi ayaa
Mid ka mid ah laba ruux oo looga shakiyay in ay u basaasayeen Imaaraadka Carabta ayaa isku dilay xabsi ku yaalla dalka Turkiga,sida ay xaqiijiyeen warbaahinta dowladda ee dalkaasi. Wararka dhimashada ruuxaan oo maalinimadii shalay
Xildhibaan C/qaadir Cosoble oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay muddo kordhin uu sheegay inay doonayaan madaxda dowladda Soomaaliya. Xildhibaan Cosoble ayaa sheegay in madaxda dowladda Soomaaliya ay doonayaan inay helaan fursad labo
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa sheegay in Magalada muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya iyo deegaanada Soomaaliland aysan ka dhaceyn doorasho ilaa laga xaliyo cabashada jira. Xilli uu shalay goobjoog ka ahaa
DEG DEG: Ciidamo Itoobiyan ah oo la wareegay Garoonka diyaaradaha Kismaayo & Cabsi jirta
May 21, 2019 muqdisho 5
Wararka aan ka heleyno magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ay sheegayaan in Ciidamada Kenya ee qeybta ka ah howlgalka AMISOM ay ka baxeen Garoonka Diyaaradaha Magaaladaas. Ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya oo
Wararkii u dambeeyay wasiiro iyo Xildhibaano lagu xanibay Garoonka Diyaaradaha Nairobi
May 21, 2019 muqdisho 0
DEG DEG+DAAWO: Wararkii ugu dambeeyay Muqdisho & Qorshe Axmed Madoobe uu damacsan yahay oo laga hor yimid.
Qaar kamid ah xildhibaanada baarlamanka Soomaaliya ee kasoo jeeda deegaanada maamulka Jubbaland ayaa ka hadlay qorshe ay sheegeen in madaxweyne Axmed Madoobe uu ka damacsan yahay soo xulista Xubnaha baarlamaanka. Xildhibaan C/rashiid Maxamed Xidig oo
DEG DEG+DHAGEYSO: Somaliland oo Jawaab kulul ka bixisay Hadal ka soo yeeray Dowladda Somalia
May 20, 2019 muqdisho 1
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye oo Maanta Warbaahinta kula hadlayay Magalada Hargeysa ayaa jawaab ka bixiyay hadal shalay kasoo yeeray Guddoomiyaha guddiga Madaxa Banaan ee doorashooyinka Qaranka. Xaliimo Ismaaciil(Xaliimo Yareey) aya shalay sheegtay
DEG DEG: Xildhibaanada BFS oo ansixiyay sharciga Batroolka oo uu muran ka taagnaa
May 20, 2019 muqdisho 6
Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Barlamaanka Soomaaliya ayaa Maanta waxaa ay kulankoodii 16aad kal-fadhigiisa 5aad ku yeesheen Xaruntooda Golaha Shacabka ee Magaalada Muqdisho. Kulanka Golaha ee Maanta ayaa waxaa soo xaadiray 154 Xildhibaan,waxaana ay ansixiyeen Xeerka
XOG XASAASI AH: Xaliimo Yareey oo dooneysa inay hal arin darteed uga guuraan VILLA Somalia
Xaliimo Ismaaciil Yareey oo ah guddoomiyaha guddiga doorashooyina madaxa Banaan ayaa shaacisay inay baarlamaanka ka codsaneyso in guddigooda loo dhiso Meel ka duwan halka ay iminka ku shaqeeyaan. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaa sheegtay in amaan